Lenovo Z6 Pro wuxuu helaa cusbooneysi weyn oo cusub oo muhiim ah | Androidsis
Lenovo Z6 Pro wuxuu helayaa cusbooneysi weyn oo cusub oo muhiim ah
Haaruun Rivas | | Lenovo, Noticias
El Lenovo Z6 Pro, oo la sii daayay usbuuc ka hor, ayaa helay cusbooneysiin cusub oo nooca 'firmware' '.11.0.457 .XNUMX'. Waxaa jira isbeddelo badan oo cusub iyo horumarin ku saabsan lakabka cusub ee la hagaajiyay ee ZUI markan.
Sidan oo kale, Lenovo wuxuu ku darsaday farsamada yareynta DC ee aadka loo sugayo si hoos loogu dhigo dhalaalka Z6 Pro. Aaladda ayaa ka tagtay tikniyoolajiyaddii hore ee 'PWN - Pulse Width Modulation' si loo yareeyo dhaldhalaalka sababo la xiriira saamaynta taban ee ay ku leeyihiin indhaha dadka isticmaala.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ayaa sidoo kale muuqaal ahaan u casriyeysay barnaamijka caafimaadka 'U'. Waxay keeneysaa astaamo cusub, sida ku darida bedelashada gacanta si loo beddelo qaabka muuqaalka habeenka sida loogu baahdo, kaarka farriinta si loola socdo dhambaalka waqtiga dhabta ah, iyo himilada gaarka loo leeyahay ee HDR10 Ultra HD oo leh hal tubbo.
Waxaa jira xoogaa isbeddelo ah oo ku saabsan UI-ga ee widget raadinta adduunka, iyo hadda adeegsadayaashu waxay kula socon karaan wararka ugu dambeeyay.
Isbedelada kale waxaa ka mid ah ku darista astaanta boqolleyda batteriga, muuqaalka shaashad buuxda, iyo hagaajinta nidaamka qaboojinta dareeraha ee 'Coldfront' oo loogu talagalay isticmaalka caqliga leh ee ilaha. Intaa waxaa sii dheer, waxay hagaajineysaa xasiloonida kamaradaha iyada oo la adeegsanayo khibrad isticmaale oo faahfaahsan waxayna hagaajisaa arrimaha sida marba marka ka dambeysa barnaamijka, u-qaadista talaabada Uhealth ee aan saxda ahayn, iyo qaladka maaraynta batteriga
Cusbooneysiintu waxay hagaajineysaa nidaamka guud ahaan nidaamka loo yaqaan 'Lenovo Z6 Pro'. Waa cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay hagaajinta waxtarka iyo waxqabadka qalabka. Tani waxay sidoo kale indhahaaga ka ilaalin doontaa bilicsanaanta DWM ee aan caadiga ahayn, iyadoo la adeegsanayo farsamada cusub ee DC dimming.
Dhibcaha AnTuTu ee Lenovo Z6 Pro ayaa la muujiyay
Cusbooneysiinta ZUI 11.0.457 ayaa ka socota Shiinaha iyo culeyskiisu waa 270.54 MB cabir ahaan. Isticmaalayaasha, fagaarayaal kala duwan, ayaa ka warbixiyay tan. Waqti ayey qaadan kartaa in la gaaro cutub kasta oo adduunka lagu kala tago.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Lenovo Z6 Pro wuxuu helayaa cusbooneysi weyn oo cusub oo muhiim ah
Ka dib 18 sano oo uu ku sugnaa Google iyo Alphabet, Eric Schmidt wuxuu iska casilay booskiisa
Iibinta Huawei ayaa kor u kacday rubuca koowaad